हामी जहाँ भए पनि मुल्य र मान्यता हराउँदैन -
ON AIRरामधुनी खबर
हामी जहाँ भए पनि मुल्य र मान्यता हराउँदैन
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ०५, २०७७ समय: १३:१०:४७
संस्कार र संस्कृमा धनि नेपाली, भौगोलिक र भाषिक विविधता सँगै साँस्कृतिक धरोहरमा हामी जहिले पनि अगाडि छौं । नेपालको जुनसुकै भुभागमा बसोबास भएता पनि हामी आफ्नो पौराणिक संस्कार संस्कृ, मुल्य मान्याताबाट पराई हुन सकिदैंन् । नेपालको आदीबासीको हकमा झन संस्कार नै पहिचान बनेको छ । विभिन्न सम्प्रदायबाट नेपाल भित्रिएका मानिसहरु आदीबासीको जमिन खोस्न सक्ला, तर जमिर खोस्न सक्दैन । हो पौराणीक संस्कार, मुल्य र मान्यता आदिबासीको जमिर हो, पहिचान हो, आत्म सम्मान हो । कुनै समय जल जमिन र वनमा पहिलो अधिकार भएको आदिबासी चाहे त्यो थारु होस, चाहे राई, लिम्बु, तामाङ, मगर जुन सुकै जात र भेषभूषाका मानिस हुन, सबै कुरा खोसिएपनि आदिबासीको पहिचान बोकेको संस्कार संस्कृति र मौलिकतालाई खोस्न सक्दैन् ।
सुनसरीको इटहरी शहर आधुनीकिकरण र विकासमा निकै नै फड्को मारिसकेको ठाउँ हो । भनिन्छ, इटहरी शहर हुनुभन्दा पहिला आदिबासी थारुहरुको घना बस्ती रहेको गाउँ थियो । अहिले पनि शहर देखी भित्र प्रवेश गर्दा भित्र भित्र थारुहरुको घना बस्ती पाउन सकिन्छ । तर घना बस्ती भएता पनि तिनीहरु अल्प संख्यक हुँदै गइरहेको अवस्था छ । यसमा केही दोष थारुको निष्कृयतामा पनि छ भने केही दोष सोझो पनको पनि छ । सुन्दर गाउँ इटहरीलाई विभिन्न ठाउँबाट आएका ठेकेदारहरुले इटहरीलाई सुन्दर नगरीको नाम दिए तर आदिबासीको रुपमा रहेका थारु समुदाय विस्तारै विस्तापित हुँदै गएको अवस्था छ । इटहरीको जल, जमिनमा मात्र हैन ग्राम थान र सामुदायीक पोखरी, कुण्डमा समेत कब्जा गरे । विघाहाबाट कठा, कठा बाट धुर र अव धुर बाट पनि एउटा कुनामा ग्रामथान राख्ने अवस्था छ । यसको एउटै कारण हो । ग्राम थानको बैधानिक दर्ता नहुनु । पौराणिक मान्यता बोकेका ग्रामथान जुन थारु आदिबासीको धरोहर मात्र हैन पहिचान हो, त्यसलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो तर राज्यको दायित्व एका तिर छन् भने कानुनी निती अर्कै तिर छ । आदिबासी भनिएका थारु समुदायको हक अधिकार राज्यले सही ढंगबाट सम्बोधन नहुँदा अधिकार आदी नै बाँकी रहेको छ । तथाति आदी अधिकारलाई पुर्ण बनाउन लागि परेका केही थारु समुदायका हस्तीले आफु तराई पहाड, गाउँ बेसी, शहर बजार जहाँ रहेपनि आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई अलिकति पनि कुण्ठित हुन दिएको छैन् ।
कोबर (महिला हस्त कला)
सित्तल पट्यिा (सुकुल) (महिला हस्त कला)
संस्कारको उद्गम अनि अन्तिम विन्दु ग्राम थान
आदिबासी थारुको धरोहको केही अंश
इटहरी शहरमा बसोबास गरिरहेका एक थारु युवा, थाकस इटहरी इकाईका सचिव तथा सामाजिक अभियान्ताको घरमा अझैपनि पौराणिक संस्कार झल्कीरहेको हेर्न सकिन्छ । इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ निवासी अशोक चौधरीको घरका भित्तामा कुदिएका यी कोबर अनि हस्तकलाबाट बुनिएका बुट्टेदार ढाकी, दौरा, मोथीका सत्संगी सुकुल (सित्तल पट्या) ले आदिबासी थारुहरुको पहिचानलाई उजागर गरेको छ । सामाजिक अभियान्ता थारु युवा अशोक चौधरीले पौराणिक संस्कारलाई व्यवहारिकरुपले सजाउदै नयाँ पुस्तामा सिप हस्तान्त्रण र युवा पिढीलाई तालिम दिदैं थारुकको पहिचानलाई अगाडि बढाइरहेको पाइन्छ ।
शहरमा बसेर पनि यी पौराणिक धरोहरलाई कायम राख्ने विचार कसरी आयो ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले सजिलो उत्तर दिनुभयो । “यो हाम्रो संस्कार हो । संस्कारले मानिसको पहिचान गराउँदछ र यो पहिचान तबमात्र जोगिन्छ जब हामी यसलाई निरन्तररुपले नयाँपुस्तामा हस्तान्त्रण गर्दै जान्छौं ।” यसले यहीकुरा सावित हुन्छ की हामी जहाँ भएपनि हाम्रो मुल्य र मान्यता हराउँदैनन् । चौधरीले थपे, “ थारु समुदायका मात्र हैन नेपालका हरेक आदिबासीहरुको पौराणिक संस्कार, संस्कृति, रितिरिवाज तथा मुल्य मान्यतालाई आदिबासीले गुम्न दिनुहुँदैन । किनकी यीनीहरु आदिबासीका पहिचान मात्र हैन अधिकार सुनिश्चित गराउने हतियार पनि हुन् । तसर्थ हामी जहाँ भएपनि संस्कार र मौलिकताको धरातललाई बिर्सनु हुदैन ।”